စိတ်ပညာ Machiavellianism, narcissism နှင့် psychopathy
စိတ်ပညာ Machiavellianism ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - ထိုဖြစ်ရပ်ဆန်း၏အနှစ်သာရ
ထိုအချိန်တွင် Machiavellianism တစ်အတွေးအခေါ်လမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ်အီတလီသမိုင်းပညာရှင်နှင့်စာရေးဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ Machiavelli ကိုအစိုးရသောမင်း၏တနျခိုးအကျင့်ပျက်မှုနည်းလမ်းများသုံးနိုငျခိုင်ခံ့စေဖို့ကြောင်းသီအိုရီ substantiated ။ ဤဝေါဟာရကိုအဆိုပါခြယ်လှယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်လူ့အပြန်အလှန်တစ်ဦးစတိုင်, ဆိုလိုသို့ရောက်ကြ၏။
လိမ္မာခြယ်လှယ်လှည့်စား, မြှောက်, ခြိမ်းခြောက်မှု, လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု, မှားယွင်းသောပစ်မှတ်အကြံပြုချက်အားဖွငျ့၎င်းငျး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိသည့်အပြုအမူများ၏မဟာဗျူဟာ Machiavellianism ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခြယ်လှယ်ဤနည်းနှင့်ရပါမည်အောငျမွငျနိုငျကွောငျးကိုချွင်းချက်မပါဘဲ, သူ့လုပ်ရပ်များအားလုံးလူသားတွေအတွက်လုံးဝပုံမှန်နှင့်မွေးရာပါဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နေသည်။ ထိုကဲ့သို့သော interaction ကအတှကျတင်ပါတယ်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်သောစွမ်းရည်, ဆန္ဒပြပွဲတည်နေရာနဲ့ကိုယ်ချင်းစာဖြစ်ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဤလူချစ်စရာကောင်းနှင့်များမှာ ယုံကြည်မှု ။ မုသာစကားနှင့်အလှည့်ကွက်ကသူတို့နေ့စဉ်အသက်တာ၌အခြေခံဖြစ်ကြသည်။
စိတ်ပညာအဘယ်သို့ Machiavellianism နားလည်စေရန်, သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးလူသား၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံတူထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်:
ထိုသူတို့အဘို့ပြည်သူ့မျှတန်ဖိုးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ရဲ့ပန်းတိုင်သဘောပေါက်များအတွက် tool အဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။
စာရိတ္တ၏သဘောတရားများကိုသူတို့ nonessential စဉ်းစားပါနှင့်ထိုကြောင့်သူတို့သည်ပဲ့ထိန်းခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
Machiavelli ရဲ့နိုင်ငံရေးအယူဝါဒပြည်နယ်အတွက်အမိန့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏နာမ၌လူတို့တဘက်၌အကြမ်းဖက်မှုများ၏မျှတမှုများအတွက်အခြေခံထားကြ၏။ သူတို့အောင်ပွဲဆီသို့ဦးတည်ပါလျှင်ပန်းတိုင်ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်နိုင်ပါသည်အောင်မြင်ရန်, ရန်သူဒါကောက်ကျစ်, လှည့်စားပါဝါရှိသူတို့ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Machiavelli အမှုပေါင်းရက်ရက်ရောရောရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ဖော်ပြထားပေမယ့်တဲ့အခါမှာရက်စက်မှု။ ဒါကြောင့်အမြတ်အစွန်းမပါလျှင်အဆိုပါဧကရာဇ်, သူ့စကားလုံးမှကပ်မပေးသင့်ပါတယ်။ Machiavellian နိုင်ငံရေး၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းစိတ်ပညာအတွက်ပြောင်းရွေ့နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဝိသေသအမှတ်အသားဖြစ်လာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကနေကျုံ့မထားဘူး။
Machiavellianism, narcissism နှင့် psychopathy
လုံခြုံရေးငွေကြေးတခါတရံမသာကျန်းမာရေးနှင့် psyche အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်, အရာနှင့်အတူစရိုက်နီးစပ်အပြန်အလှန်အမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ psychopathy, narcissism နှင့် Machiavellianism: စိတ်ပညာ, သူတို့သည်မှောင်မိုက် triad အတွက်စည်းလုံးညီညွတ်ကြပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမစာနာမှု daffodils ထင်ရှား mendacity, မောက်မာရှိပါသည်။ စိတ်ကသူတို့ကိုဆင်တူပေမယ့်အရည်အသွေးကပိုသိသိသာသာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ကရုဏာမဲ့နှင့် antisocial အပြုအမူရောက်ရှိဖို့။ စိတ်, ဤပင်အရည်အသွေးတွေခုနှစ်, narcissism အတွက်ဝယ်ယူပေမယ့်မသိလိုက်အသုံးပြုကြသည်နှင့် Machiavellianism ကလူတစ်ဦးသတိကိုင်တွယ်ဆိုလို။
ထိတွေ့မှု၏အထူးနည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့ SUMMARY machiavellianism:
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသသို့နှင့်မတော်တဆအဆက်အသွယ်လျှင်အဖြစ် entry ။
အရှိန်သို့မဟုတ် deceleration ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ - ထိုစကားပြောဆိုမှုနှုန်းကိုပြောင်းခြင်း။
အဝိဇ္ဇာအဖြစ်ဖြင့် Information ကိုလှညျ့စား။
ဖွံ့ဖြိုးပြီး machiavellianism Mc စကေးအဆင့်ကိုတိုင်းတာရန်။ ဒါဟာဖို့တစ်ဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည် အခြားလူများ manipulate , စိတ်ခံစားမှုအအေးနှင့်တွက်ချက်မှုသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ခံထားသောကိုယ်ကျင့်တရားအခြေခံမူလျစ်လျူရှုထား၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။ Mac ကအပေါ်တစ်ဦးမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူလူ - ယှဉ်ပြိုင်ရိုက်နှက်ယုံကြည်ကိုးစားမှုနှင့်မဆိုကုန်ကျစရိတ်မှာအောင်မြင်နိုင်စကေး။
Machiavellianism အပေါ်စုံစမ်းသွားနိုင်ပါတယ်ယူပါ ဒီစာမျက်နှာ ။
ဤအယူအဆဘုံကောငျးကြိုးအတှကျမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ်ရင်းတရားမျှတရန် Machiavellian နိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ တိုင်းပြည်အတွင်းအစိုးရ၏အခွင့်အာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မီဒီယာများ၏အကူအညီဖြင့်ကောက်ယူအများပြည်သူထင်မြင်ချက်၏ခြယ်လှယ်လည်းသူတို့ကိုအောင်မြင်ရန်ဖို့နည်းလမ်း၏ဦးစားပေးရည်ရွယ်ချက်များ၏ဒေသနာအပေါ်အခြေခံထားတယ်။ အတော်များများကသင်တန်းဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်း careerists, လူတွေအာရုံစိုက်မြှင့်တင်ရေးအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်ရာထူးအဆင့်တဆင့်မြင့်တက်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမသုံးကြဘူးအကြံပြုပါသည်။
မြန်နှုန်းစာဖတ်ခြင်း technique ကို
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နှင့်မည်သို့သုံးစွဲဖို့မည်ကဲ့သို့ - တစ် torrent ကဘာလဲ?
ကက်သလစ်ဘာသာ - ရှေးရိုးစွဲကက်သလစ်ဘာသာအကြားခြားနားချက်?
အဆိုပါ interface နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ကဘာလဲ?
Budgerigar foliated နှုတ်သီးထဲမှာ
Georgina Rodriguez ကျောင်းမှာသားစီရော်နယ်ဒိုနှင့်တွေ့ဆုံ
Thoracic Elixir ကလေးများ
အမျိုးသမီးအရက် - အခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်မည်သို့ကြောင့်စစ်တိုက်ခြင်းလော
Salmonellosis - အကျိုးဆက်များ
သစ်တော်သီးနှင့်အတူ Charlotte - အရှိဆုံးအရသာအနံ့မုန့်ဖုတ်ချက်ပြုတ်နည်းများ 10
ကြိုးကိုနှင့်အတူဖိနပ် - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်နည်း